Iilwandle zeNdlu eziphucukileyo
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAbel
Indlu yeDUPLEX (encanyathiselwe) ekwiPlayas de Tijuana. Wonke umntu wamkelekile kungakhathaliseki imvelaphi yakhe, inkcubeko, inkolo, imvelaphi, njl. Ngaphantsi kweemitha ezingama-500 ukusuka elunxwemeni, indlu ikwindawo elungileyo kwaye ineenkonzo ezisisiseko. Indawo yokungena enkulu kunye negaraji kwabelwana ngayo nenye i-Airbnb kunye nababuki zindwendwe. Ukuba ukhangela okungaphezu nje kwendawo yokuhlala yakwa-Airbnb, wamkelekile, thumela isicelo sakho nayo nayiphi na imibuzo eyongezelelweyo. Sihlala ecaleni, nokuba kunjalo.
Indlu yabucala kunye ne-DUPLEX epholileyo (encanyathiselwe) enesitayile saseMexico kodwa ngochuku oluphucukileyo. Kwigumbi lokuhlala iziko elihle kunye ne-arch yezitena kunye nomabonwakude. Amagumbi amabini aphakathi ajongene negadi, apho kukho iitafile ezimbini kunye nezambulela zazo, ezifanelekileyo kwiiNtlanganiso okanye amaQela anesivumelwano sangaphambili. Indawo entle, ezolileyo nekhuselekileyo. Ngedrowa yokupaka enye KUPHELA. Sihlala kwicala, nantoni na.
4.84 · Izimvo eziyi-400
I-Playas de Tijuana, yindawo ezolileyo kwaye entle. Kukho izindlu ezininzi ezinobukhulu obuhlukeneyo kunye nemibala, eyenza ibe yodwa kwaye ihle ecaleni kolwandle. Inokufikelela ngeendlela ezininzi ukuya elunxwemeni. Kufuphi nendlu malunga neemitha ezingama-500 kukho indlela yokuhla ukuya elunxwemeni kunye nezitebhisi ezikwimeko entle kakhulu. Kukwakho nebhodi yabakhenkethi yonke, apho unokufumana iindawo ezininzi zokutya, iikhefi kunye neeresityu. Kumanxweme aseTijuana, uya kufumana iWalmart, iStarbucks kunye neplaza eneCINEPOLIS (cinema) kunye neendawo ezininzi zokutya okanye ube nebhiya. Kwisitrato esinye apho indlu ikhoyo, kukho isikhululo segesi esifikeleleka kakhulu sokugalela i-petroli, kwaye ekoneni kukho i-TACOS EL FRANCES, enye yezona tacos zaseMexico ezidliwayo eTijuana (ngokuqhelekileyo zivula emva kwemini okanye ngokuhlwa).
Sihlala kwindlu edibanayo, ngaphakathi kwendawo yezindlu, nangona kunjalo izimele ngokupheleleyo kwindlu ese-AIRBNB. Ukuba ufuna uncedo lwalo naluphi na uhlobo, musa ukulibazisa ukusikhangela okanye ukunkqonkqoza emnyango ukuze sikuncede ngayo nantoni na efunekayo.
Sihlala kwindlu edibanayo, ngaphakathi kwendawo yezindlu, nangona kunjalo izimele ngokupheleleyo kwindlu ese-AIRBNB. Ukuba ufuna uncedo lwalo naluphi na uhlobo, musa ukulibazisa uk…